Is-Afgarad Guul Kuma Gaadhayo | Martech Zone
Khamiis, May 1, 2008 Axad, Sebtembar 30, 2012 Douglas Karr
Mid ka mid ah doodaha aadka u xiisaha badnaa ee aan ku lahaa mid ka mid ah shaqooyinkayga waxay ahayd inaan joojiyo raacitaanka waxa qof walba u sheegay inuu doonayo oo aan bilaabayo cusbooneysiin. Xaqiiqdu waxay tahay tan xigta weyn waxbaa la abuuri doonaa la'aanteed qof weydiisanaya.
Haddii aad tahay istaraatiijiyad inaad ka farxiso qof walba, waxaad ku bixin doontaa kheyraad kasta oo aad isku daydo inaad ku sameyso iibka xiga, la soco tartanka, ku dar astaamaha la codsaday, ama kaliya wax ka beddel loogu sameeyo macaamiisha qaylada ugu badan. Adigu waxaad u shaqeyn doontaa naftaada illaa dhimasho.
Waxaan ku soo jiidan karaa qaar ka mid ah isbarbar yaaca siyaasada dhowaan, laakiin taasi waa caajis. Aynu eegno halkii loo yaqaan 'American Idol' - halkaasoo dad badani ka codeeyaan marka loo eego doorashooyinka madaxweynenimada, si kastaba ha noqotee. Sidee iibinta loogu barbardhigayaa codadka American Idol?
7 milyan nuqul
Quluubta Qaar, Carrie Underwood (guuleyste, xilli 4)
6 milyan nuqul
Breakaway, Kelly Clarkson (guuleyste, xilli 1)
3 milyan nuqul
Daughtry, Chris Daughtry (kaalinta 4aad, xilli 5)
2 milyan nuqul
Mahadsanid, Kelly Clarkson
Qiyaasta Ninka, Clay Aiken (kaalinta labaad, xilli 2)
Raacitaanka Carnival, Carrie Underwood
1 milyan nuqul
Soulful, Ruben Studdard (guuleyste, xilli 2)
Ciid wanaagsan Ciidda Kirismaska ​​ah, Clay Aiken
Naftaada Xor, Fantasia (guuleyste, xilli 3)
Bishii Diseembar, Kelly Clarkson
Taylor Hicks, Taylor Hicks (guuleyste, xilli 5)
Waxaan Ubaahanahay Malag, Ruben Studdard
Josh Gracin, Josh Gracin (kaalinta 4aad, xilli 2)
Waxyaabaha dhabta ah, Bo Bice (kaalinta labaad, xilli 4)
Kun Siyaabo Kala Duwan, Clay Aiken
Gabadha Yar-yar, Kellie Pickler (kaalinta 6aad, xilli 5)
Elliott Yamin, Elliott Yamin (kaalinta 3aad, xilli 5)
Lix xilli ciyaareed iyo 30 milyan + albums kadib, waxaa xiiso leh in la fiiriyo kuwa ka mid ah guuleystayaasha (iyo kuwa khasaaray). Carrie Underwood iyo Kelly Clarkson ayaa xisaabtamaya ka badan kala badh iibka guud.
Taasi ma guul baa? 6 sano gudahood 2 'wax soo saar' ayaa sameeyay kalabar guud ahaan iibka. Kaliya mid ka mid ah 'wax soo saarka' ayaa runtii ahaa jab. (Kelley Clarkson tan iyo markii ay ahayd Idol kii ugu horreeyay.) Anigu ma ihi tirakoobyahan, laakiin haddii aan qorsheynayo codad, sannado iyo duubitaanno iib ah not Ma hubo in tani ay la kulmayso fikrad kasta oo ah guusha Lixda Sigma
American Idol waa bandhig telefishan oo aad ugafiican kan raadinta hibada muusikada. Iibinta aad aragto runti waa iska mahadcelin caan ka ah bandhigga. Marka la eego MAYA show, ma hubo in mid ka mid ah tayada uu iibin lahaa albumyo badan sida ay iyagu sameeyeen.
Aad baad u madhantahay
Saaka waxaan arkay wareysi halka Carly Simon waxaa loogu tacsiyeeyay Brooke White helitaanka kabaha xalay. Carly waxay u sheegtey inay sii wadato waxay samaynayso. Carly xitaa waxay sheegtay in nooca Brooke ee ku dhuftay uu ahaa kii ugu fiicnaa ee ay waligeed maqasho.
Talada Carly waxay ahayd tan (fasalka).
Ku guuleystaha American Idol ma ahan kan ugu fiican ama kan ugu caansan, waa kan ugu caansan.
Awoodda ay soo rogayaan dhammaantood waxay u egyihiin isla markaana u dhaqmayaan si isku mid ah (Daughtry uma dhigmin biilka gabi ahaanba!), Laakiin hibada gaarka ah waa halka ay ku taal Waa fanaaniintaas kuwa cimrigooda sii socon doona - kuwa kalena waxay u badan tahay inay ka libdhi doonaan iftiinka tooska ah (qaar baa hore u lahaa!).
Sidee ayuu Bob Dylan ku sameyn lahaa Idol-ka Mareykanka? David Bowie? Qaniinyo? Ma hubo in midkoodna wareegga koowaad sameyn lahaa. Waa shaqsiyadooda ayaa kaxaajisay iyaga, ee maahan awooddooda inay sifiican uga muuqdaan kamaradda oo ay garaaceen qoraal sare dhowr ilbiriqsi. Uma qaadanayo darbooyin raqiis ah hibada 'Idol' - waa dad karti badan oo hibo leh waxayna u qalmaan fursaddooda inay ka dhigaan wax weyn. Ma garaacayo kartida. Waxaan garaacayaa geeddi-socodkii loo maleynayay in lagu tirtirayo Sanamyada Mareykanka sanadba sanadka ka dambeeya.
Idol American wuxuu faa'iido u yahay shirkad guud ahaan. Bandhigga telefishanka ayaa ka mid ah kuwa ugu fiican ee socda dhowr sano. Iyada oo leh xawaarahaas oo dhan, saxaafadda, cabirka dhagaystayaasha, iwm, Sanamku waa inuu LAHAA Jaantuska Billboard. Laakiin iibinta rikoorka Idol ayaa sii socota inay hoos u dhacdo. Sababta Sababtoo ah sanadba sanadka ka dambeeya, waxay adeegsanayaan is afgarad si ay u helaan cidda ku guuleysata.
Tags: waqtiga rarka boggawaqtiga xamuulka boggadhacdo baraha bulshadaxawaaraha webka
Qoraal xiiso leh. Waxaan u maleynayaa in dadka intiisa badani ay kufiican yihiin inay nuqul ka sameystaan ​​moodel guuleysta, hase yeeshe, oo ay ku helaan qaddar macquul ah oo guusha leh. Si loo helo nooca guusha ee Dylan waa inaad noqotaa mid gaar ah, karti iyo nasiib badan. Marnaba ma dhici doonto in ka badan in yar.
Dabcan waligaa ma ogaan kartid, malaha aniga ayaa ah. 😉
Waxaan u maleynayaa in dadka waa 'badbaado' nuqul ka mid ah moodal guuleysta laakiin ma hubo inay ka roon yihiin. Mar alla markii aad moodo, waa inaad leedahay sabab qasab ah oo aad ku bixin karto mid labaad ama saddexaad ama lixaad. Waxaan la yaabanahay haddii American Idol aysan ku fiicnaan doonin inay yeelato nooc waddan ah hal sano, nooc kale oo dhagax ah, hiphop kale… Uma maleynayo bixinta nooc isku mid ah sanad kasta inay sii wadi doonto ganacsiga - xaqiiqdii maahan rikoor sii socda iibinta.
Waad ku mahadsantahay faallooyinka - waa dood mudan!
Hagaag, haddii mid gaar ahi yahay waxa ay qaadanayso in uu noolaado noloshiisa oo dhan, markaa waxaan arki doonnaa Taylor Hicks oo ag jooga muddo dheer, waqti dheer. Ayaa garanaya haddii uu waligiis weynaan doono, laakiin wuu ka cago jiidayaa inuu halkaas joogo. Inbadan oo naga mid ahna runtii, runtii waan ku raaxeystaa isaga. Wuxuu ka duwan yahay wax waligey oo aan arkay. Jacayl codkiisa.
Codka Brookes waa midka aan ku raaxeysto sidoo kale.
Qosol Waxaan xalay ku iri xaaskeyga in American Idol aysan soo saarin Super Star weyn mudo labo xilli ah hada. Carrie Underwood ayaa aheyd tii ugu dambeysay (Simonna wuxuu kujiray inay noqoneyso Idol tan ugu caansan abid). Waxaan kula tartamayaa inta badan daawadayaasha American Idol inay magacaan (siday u kala horeeyaan) kuwa ku guuleysta American Idol oo ka baxa madaxa korkiisa. Waxay ku saabsan tahay caan ahaanta… waqtigaas. Tusaale ahaan, yaa ku guuleystay Super Bowl saddex sano ka hor? Muddo intee le'eg ayay ahayd inaad ka fikirto taas?
Digniinta bilaa xishood la'aanta ah: Ilaa iyo inta aan ku jirno mawduuca "American Idol", haddii aad rabto qosol wanaagsan, ka eeg bogaan saaxiibkay aniga iyo waxaan bilownay toddobaad ka hor. Waa bog gaaban oo ku saabsan sharciyada * waxaan * u maleyneynaa in tartamayaashu ay tahay inay raacaan: http://ouridolrules.wordpress.com.
Xeerarkeenna Sanamyada waa kuwo qosol badan. Aniga ayaa ahaan lahaa, “Ku qod qod Simon. Dadku waxay u codeynayaan si ay u arkaan isaga oo xanaaqsan oo xarago leh. ” Sameynta ka dib markii ugu horreysay ee Simonizing ay goor dambe tahay.
Waad saxan tahay faallooyinkaaga kale sidoo kale. Simon wuxuu ahaa sax re: Carrie; si kastaba ha noqotee, waxaan ku dari lahaa in in badan oo ka mid ah caannimadeeda ay horseed u tahay quruxdeeda cajiibka ah, ma aha oo kaliya hibada codka. Ma hubo inay ahaan lahayd Billboard 100 kahor da'daan fiidiyaha ah.
Su'aal kama taagna in guusha Dylan aysan ahayn sababta oo ah wuxuu ahaa / yahay heesaa weyn. 🙂
Xalka BitWise, Inc.
Sannadka koowaad ka dib, ma jiraan wax cusub oo ku saabsan American Idol. Sida aan ka walwalsanahay dadka ay u xushay inay ka muuqdaan bandhiggu dhammaantood waa guuleyste. TV-ga ayaga ayaa laga ogaadaa waana isqortaan!